Ny amin’ny « Ady Gasy » – Adygasy-systemD
décembre 13, 2014 février 5, 2015 Adygasy-systemD
Ny amin’ny « Ady Gasy »
Ny zavatra tsapa matetika dia mihanona amin’ny findraman-damba sy ny randram-bao foana isika Malagasy raha misy hatao na hevitreverina amin’ny fiainana. Toy ny henatra ho an’ny maro amintsika Malagasy ny mamela ny foto-pisainana nentindrazantsika hiaina malalaka, na dia atao aza hoe tsy azo iodivirana, noho ny fandrosoana, ny fanarahana ny fomba amam-panao vahiny. Mba hanaovana antsika hoe tsy tara amin’ny « FANDROSOANA» angamba dia arangaranga fa mahalala sy mahay ny fomba vahiny isan-karazany izao isika.
Ady hevitra tsy vita ny mikasika ny toerana sahaza ny rivo-pandrosoana avy any ivelany, fa ny tiana avoitra sady antitranterina eto dia ny mbola fananantsika harentsaina tsy lany hamamiana – toy ny fary lava vany – nefa zary lasa verivery fotsiny, satria na dia isika tompony aza tsy tia. Ny zavatra tsikaritra aza dia ireo sady tsy tompony no tsy mahalala izay atsimo sy avaratra momba ny harentsaintsika indray no, asa raha taitry ny randram-bao, fa dia tia sy toa mandala bebe kokoa ny harentsaintsika. Ny tsy tsapantsika angamba dia ity: raisiny izy ireny na dia hakany hevitra fotsiny aza, dia averiny aty amintsika amin’ny endrika vaovao ka lasa toa azy, satria avy any aminy, ka babony tanteraka na ny fontsika na ny fitiavantsika izay mihevitra fa « endrika vaovaon’ny fandrosoana io », nefa ny antsika ihany io nohatsarainy tany aminy io.
Tsisy maharatsy ny fandrosoana, na koa hoe ny fanarahana ny toetrandro, saingy aoka hazava izay tena nateraky ny fandrosoana sy izay efa teo ihany, izany hoe tonta ka nohatsaraina hifanaraka amin’ny toetrandro; izany hoe izay mbola mahatahiry ny hanitra nentindrazana nefa velomi-maso ho enti-miaina amin’izao ankehitriny izao –izay azo atao tsara nefa tsy natao ka lasa toy ny tsy fanao sy manaviavia be ihany.
Eo anatrehan’ny fifofofofon’ny rivo-panovana mahery eto amin’ny firenena izao anefa, dia noraisina ho teny filamatra ihany ny hoe « ADY GASY », izay midika FIVERENANA AMIN’NY MAHA-MALAGASY, nefa novoarina hifanaraka amin’ny toetrandro. FANDALINANA NY MAHA-MALAGASY no resaka eto, fampivelarana izany mba hananany ny toerana sahaza azy sy mifanaraka amin’ny toetrandro.
« ADY GASY »:
– Fikajiana ny foto-pisainana sy ny fomba fijery ny fiainana ary ny harentsaina nananan’ny razana teo aloha, na tsy ho arahina manontolo fa anovozan-kevitra fotsiny ihany aza ka enti-miaina amin’izao andro ankehitriny izao.
– Fomba entina manao zavatra iray, na entina mijery zavatra iray, ka tsy anariana na anamaivanana ny fahalalana nananan’ny teo aloha akory, fa iaingana aza ka atsaraina na atevenina araka ny fandrosoana ankehitriny; ny mba tsara ho fantatra aza dia ny lesoka sy izay tsy ampy tamin’ny fahatakaran’ny teo aloha.
– Ny « ADY GASY » izany dia fomba fiteny ihany, ka ny hevitra tiana ampitaina, dia ny fitondrana ny « tena » sy ny « fiainana » ho araka ny maha-malagasy ny tena. Tsy dia azoazon’ny olona loatra ny fitenenana ity maha-malagasy ity (indrindra fa ny tanora), fa hoe mampihemotra hono. Tsetsatsetsa tsy aritra anefa no ilazanay, fa ampy nananan’ny Ntaolo olom-banona sy tsara taiza ary olo-manga mihitsy aza ny haren-tsaina sy ny kolontsaina malagasy, na dia atao aza hoe tsotsotra ihany aza ny endriky ny fitaizana fahiny !
– Ny « ADY GASY » izany dia mitaky fahalalana ny toe-tsaina tena malagasy sy ny foto-pisainana amam-pahendrena malagasy, izany hoe ny fahatakarana ny MAHA-MALAGASY. Tsy ady ara-bakiteny akory no resaka eo, fa fomba fiaina amam-panao mifandraika amin’ny fomba gasy, ka atao hoe « ADY GASY »: fomba fiaina, fomba fisaina, fitondran-tena no tena tiana avoitra amin’ny hoe « ADY GASY », izay tsy anamaivanana na anafoanana ny fandrosoana entin’ny toetrandro akory, fa iaingana aza ahitana ny mety sy ny tsy mety.
– Mahafaoka be noho izany ity « ADY GASY » ity, ary tsy voafetra loatra ny sehatra mety sy tsara ampiasana azy, fa raha mbola mikasika ny fiainana dia mety foana. TOE-TSAINA mihitsy aza izy raha ny tena marina, satria mamaritra « FOMBA ».
* Lohateni-na hira iray maneho ny fahitana ny tontolo politika nisy sy niainana teto amin’ny tany gasy koa ny « ADY GASY» , indrindra fa ny fiheverana ny vahoaka hatrizay; hatreo izy dia manoritra izay heverina fa tokony ho toe-tsaina ananana manoloana ireny raharaha ireny: « …ADY GASY, teny ierana fitana, loabary an-dasy ! ».
* Jereo koa ny Apokalypsia 21:26 « Ary ny voninahitra sy ny hajan’ny firenena maro dia hoentina ao anatiny »: ny rain’ny mpanoratra no nanoro io andalan-tsoratra masina io, raha sendra nahita ity votoatim-panadiadiana sy ady hevitra momba ny « ady gasy » ity.
* SARY tamin’ny « HETSI-BAHOAKA FILAHARAMBE » 26 Jiona 1991 teo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena -Antananarivo: mitsangana eo ankavia, ny mpanoratra Rakotoarivelo Manoela.
Desambra 1991 / Rakotoarivelo Manoela – Mano / “Ny Feon’ny Vatolahy”
ho an ny Initiatives & Développement Madagascar
sokajy “teny gasy” : jereo koa https://adygasysystemd.wordpress.com/kolontsaina-sy-fandrosoana-malagasy/
Posté dans Teny gasyTagué ady gasy, Adygasy-systemD, kolontsaina, MalagasyLaisser un commentaire
Article PrécédentADY GASY : 1 Film & des Cultures MalagasyArticle SuivantMadagascar 2014: Happy End après Transition ?